'Isakhamuzi Esibi 2' Isilungiso Sithola Itrailer Nosuku Lokukhishwa! - iHorror
Ikhaya Amageyimu evidiyo 'Isakhamuzi Esibi 2' Isilungiso Sithola iTrailer Nosuku Lokukhishwa!
'Isakhamuzi Esibi 2' Isilungiso Sithola iTrailer Nosuku Lokukhishwa!
by U-Eric Panico June 12, 2018
ebhalwe ngu U-Eric Panico June 12, 2018
I-Playstation E3 Ingqungquthela isanda kuveza ukubuyiswa okulindelwe okwesikhashana kwe-1998's classic horror classic Resident Evil 2! Nyakenye Resident Evil 7 bekungukubuyela ezimpandeni ezethusayo ze-franchise, ngemuva kokuthi imidlalo yakamuva iqale ukuncika kakhulu esenzweni nasemicimbini yesikhathi esisheshayo. Manje iCapcom isibuyisela emuva ekuqaleni kwesifo.
Resident Evil 2 yisibonelo se-quintessential sokunciphisa ukwesaba, i-gameplay yasemkhathini i-franchise eyakhelwe phezu kwayo, futhi omunye wemidlalo ehamba phambili ochungechungeni. Okokuqala Owakhile omubi ithole isikhumbuzi se-HD esiphumelele kakhulu emuva ngo-2002, futhi abalandeli baye bazibuza kusukela lapho Resident Evil 2 bazothola impatho efanayo.
I-trailer ivuleka ngombono wokufuna ukwazi njengoba sikhasa emashalofini agcina izimpahla, futhi sibona iphoyisa lixabana nomsolwa ongabonakali. Njengoba ishalofu ebesinamathele kulo ngamathiphu ngaphezulu, lembula ukuthi besikubona lokhu kwenzeka ngamehlo egundane (manje elichotshoziwe). Leli phoyisa liqala ukubonakala, njengoba ubhontshisi efaka amazinyo akhe entanyeni yephoyisa edabula ucezu olukhulu lwenyama.
Kuqhuma isibhamu, i-zombie iwele phansi (njengokuthi ifile) phansi njengoba i-rookie uLeon Kennedy ibonakala imi izanyazanyiswa emnyango nengalo yayo ebhemayo. I-trailer bese isishaya nge-cacophony ye-grunge, ukumemeza, kanye nomsipha wegazi.
ICapcom inciphise ukwesaba kuze kufike ku-11 njengoba ithoni ye-trailer ihambe ngokumnyama kakhulu futhi ishubile (kakhulu ngendlela efanayo Isakhamuzi Esibi 7). Sibona futhi noClaire Redfield ophikisayo emenza abuye ngokunqoba.
IRaccoon City ayikaze ibonwe ngokumangalisa ngokwengeziwe njengoba sisika emigwaqweni eshiyiwe, egcwele imvula, siye ezindlini ezisabekayo, ezigcwele igazi. I-trailer inamagagasi ashukumisayo, akhanyayo, nezibonakaliso ezimnyama ezinhle, ezinamamodeli ezinhlamvu ezinhle. Izimoto zivutha amalangabi, ama-zombies ayashayisana kuzo zonke izingqimba, futhi size sibone ezinye zezinengiso ebezihlasela amaphupho ethu amabi. AmaZombi, kanye namaLickers, namaTyriya ... oh my.
Imidlalopot ibika ukukhishwa kwabezindaba kuqinisekisa ukuthi igeyimu ibuyile isuka Isakhamuzi Sobubi 7's umuntu wokuqala we-POV kumuntu wesithathu ngaphezu kwehlombe. Kodwa-ke, umdlalo wegeyimu ubonakala ngokuhlakanipha ugcina ukugxila kwawo enyantweni enyantisayo ngokungafani nesenzo esisheshayo. AmaZombi futhi kubikwa ukuthi athatha "ukulimala okubonakalayo okusheshayo" ngesikhathi sangempela.
Ngokujabulisayo, abalandeli ngeke balinde isikhathi eside ukuhamba imigwaqo egcwele i-Zombie City zombie futhi. I-trailer iphela eqinisekisa usuku lokukhishwa ngoJanuwari 25thAma-oda wangaphambilini ayatholakala ukuthenga umdlalo ku-Playstation 2019, i-Xbox One, ne-PC.
Yinye into eqinisekile… ukusebenza kwezwi sekuthuthukile impela.
Bheka i-trailer khona lapha:
Ucabangani nge-trailer?! Ngabe ujabulile ukubuyela eRaccoon City? Thumela imicabango yakho kumazwana!
I-Biohazardbiohazard 2CapcomE3Owakhile omubii-2 emibi
'Ifa' Kungukuvulwa Okukhulu Kakhulu kwe-A24 EBox Office
'I-Death Stranding' I-E3 Trailer Wows Ngokuqina Okuqondile
Abalingiswa 'Bezinye Izinto' Bajoyina 'Abafile Ngemini' ku ...
'INecromunda: I-trailer Eqashiwe Egcwele Isihogo, ICyberpunk, ...
'Ububi Bokuhlala: Ubumnyama Obungenamkhawulo' Ingabe Bungobakho Nge-Biohazard ...
Kwangathi 27, 2021
I-trailer 'Yomngane Wangaphakathi' Ihlola Konke Okwesabisayo ...
'Rambo' no 'Die Hard' Woza 'Kubizwe ...
I-Crypt TV neThimba 'elifile ngeMini' ...
Kwangathi 4, 2021
'I-Evil West' Ihlanganisa i-Rootin, i-Tootin Six-Shootin namademoni ...